Naphezu kweqiniso lokuthi ejaculation ngaphambi kwesikhathi e amadoda kaningi, imithi yakhe ine imiphumela emihle. Ezimweni eziningi, ochwepheshe aye ayisebenzisa kaningi uhlelo multiphase, okuyinto ihlala isikhathi eside. Izindlela yelule ubuhlobo bobulili silula futhi kungenzeka ukuzisebenzisa ngaphandle kosizo ochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, kukhona amasu ezimbalwa ezilula ukuthi kuzosiza aqukethe ejaculation. Kuyinto ngazo futhi uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Ngakho njengoba ukwandisa isikhathi sokuya ocansini? Ezimweni ezithile, indoda usebenzisa amanye amathiphu alula ungathola ukulawula abalulekile phezu ejaculation yabo. Abantu abahlasela unenkinga ayitholakali (kanye nabesifazane) isu idatha Nokho, kufanele ufunde njengoba ukwandisa isikhathi sokuya ocansini cishe, futhi ungathanda ukuba. Qhubekisa ngokuthwebula ngqo amasu.
Abesilisa abaphethwe ejaculation ngaphambi kwesikhathi, ungase uphawule ukuthi bayakwazi ukwandisa isikhathi sokuya ocansini uma kwenzeka ezokwenza orgasm kaningi ngangokunokwenzeka. Uma ubulili nomlingani ngasizathu simbe kungenzeki, uzokwazi ukusiza indlwabu njalo.
Ngenxa yokuthi kukhona bezibona ukungabi nakwenzeka kwento ubulili Ngokuqhubeka ngemva orgasm indoda, kwakunabamemezeli abambalwa kuphela abangabodwa namabhuzu wahlanganyela nabo ngokushesha ngemva umvuthwandaba. Worth uzama ukuqhubeka ubuhlobo bobulili futhi ukwakhiwa e amadoda sivele ngemuva kwesikhathi esithile.
Worth ekuzameni ukushintsha isikhundla. Okuyisidina imisipha ukungezwani ngesivinini eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Ngakho, lapho ephendula umbuzo kanjani ukwandisa isikhathi sokuya ocansini, kufanele kusho ukuthi kubalulekile ukuba izame zibhekise. Ngaphezu kwalokho, uzophawula ukuthi lapho umuntu ethatha isikhundla phezulu, khona-ke akakwazanga ukumsiza kusheshiswe umsebenzi, njengoba saphoqeleka ukuba ukusebenzisa amandla ngokulondoloza ngisho isisindo sayo. Abaningi kusiza ukuthola ukulawula ejaculation isikhundla lapho owesifazane phezulu. Kufanele kuphawulwe ukuthi ngemva konke ukuma eyodwa wonke isenzo akwanele. Kukhona kungenzeka ukuthi, ngokushesha emva kokuba abalingani ziqala ukuba ulinge kulo mkhakha, ejaculation kwenzeka ngisho ngokushesha. Kodwa lokhu kumane nje kuyisiqalo loko.
Ukuze kwandiswe socansi, kubalulekile isikhashana ukumisa ukunyakaza. Uma kuleli cala hhayi ukuqala zokuxhumana, uzakwethu nje ngeke baqonde lapho ukuze kuxazululeke ezishukumisayo. Ngaphezu kwalokho, unganqikazi ukucela usizo intombi yakhe.
Kuyadingeka ukuba uhlolisise yonke imigudu kunokwenzeka. Abaningi ekutholeni impendulo yombuzo kanjani ukwandisa isikhathi sokuya ocansini ngaphawula ukuthi ngezinye izikhathi iyasiza cabanga isenzo njengoba omunye izindlela ukuchayeka ngokobulili. Kodwa kunezinye amathuba ukufinyelela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili, okungase icele uma isidingo.
Uma uzokwenza konke ngokufana ncamashí wawulotshwe ngenhla uthi, ungakwazi yelule bezoziphatha zakho zobulili. Akunakwenzeka ukuthi ucwaningo ezifana kothile abalingani ziyoba zimbi.
Amakhondomu Sensex - «ashisayo» futhi ucansi oluphephile kuqinisekisiwe!
Prolongation sobuhlobo bobulili
Uhlolojikelele Model "Patriot 3160". UAZ-3160 - engibaziyo Russian ezenziwe
Indlela ukupheka pancake nge kefir ngamanzi abilayo: izinto ezahlukene ongazikhetha
Kungani silume ingono, futhi ungabasiza kanjani kulesi simo?
Izimpawu encephalitis ezithwalwa ezihlukahlukene